मेरा ‘बा’ को नियति नहोस्
ब्लग मेरा ‘बा’ को नियति नहोस् जगत नेपाल
बाह्रखरी - आइतबार, चैत १६, २०७६
जेठा दाजु (दुल्लु नगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुख) को फोन आयो । एकदमै आत्तिएर भन्दै हुनुहुन्थ्यो – ‘‘लौन साह्रै गाह्रो पर्‍यो । कामका लागि भारत गएका कामदार हुलका हुल फर्किएका छन् । ‘आइसोलेसन’मा बस्न मान्दैनन् । चेतनाको अभावमा धेरैलाई त कोरोनाले कस्तो असर पार्न सक्छ भन्ने अन्दाज नै छैन । बुझाउनसमेत गाह्रो छ । हुल बाँधेर घुमिरहेकालाई प्रहरीले समाउन पनि सकिरहेको छैन । संक्रमणबाट जोगिन स्वयं प्रहरीसँग साधन स्रोत केही छैन । यस्तै रह्यो भने त सबका सब मर्ने अवस्था आउन सक्छ ।’’
लगत्तै आफूले चिनेका स्वास्थ्य मन्त्रालय, अस्पताल र अलिकति पहुँचमा रहेका केही मानिसलाई फोन गरेँ । सबैबाट उस्तै जबाफ पाएँ – पहिलो कुरा त त्यस्तो सामग्रीको केन्द्रमै अभाव छ । डाक्टरहरुले समेत पाएका छैनन् । भए पनि त्यो पहाडमा पुर्‍याउने कसरी ?
निरुपाय भएर फोन गरेँ – ’’खै दाइ सम्भव होलाजस्तो लागेन । यहीँका अस्पतालमा डाक्टरले पाएका छैनन् रे !’’
कोरोनाले सिंगो विश्वलाई आतंकित बनाइरहँदा नौ दशकअघि आफ्नै परिवारले भोगेको महामारी बारे लेख्न मन लाग्यो । पिता जी सधैँ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो – ‘‘हेर ! मेरी आमाको काजकिरिया भएको छैन । मैले जीवनकालमा गर्न सकिन । तिमीहरुले सक्यौ भने गरिदिनु ।’’
पिता जी जीवित रहुन्जेल (२०६३ सम्म) उहाँको त्यो आग्रहलाई गम्भीरतापूर्वक लिएनौ । के भएको थियो ? उहाँले किन आमाको काजकिरिया गर्न नसकेको हो ? सोधिएन । सोधौँला नि बा छँदै हुनुहुन्छ भन्ने लाग्यो । बा परलोक भएको दस वर्षपछि मात्र उहाँको आग्रहअनुसार हजुरआमाको आत्माको शान्तिका लागि यज्ञ गर्ने निर्णय दाजुहरुले गर्नुभयो ।
हाम्रो पुख्र्याैली थलो साबिक नेपा गाउँ विकास समिति वडा – ९ (हाल दुल्लु नगरपालिका – २) मा पूजाको तयारी भयो । पहाडमा बस्ने दाइ आत्मप्रसादलाई व्यवस्थापनको जिम्मा दिइयो । परिवारका सदस्यले एकाहा र लाख बत्ती बाल्ने पूरा तयारी गरिसकेपछि अन्तिम दिनमा म काठमाडौंबाट गाउँ पुगे । पत्रकार हो । यसलाई फुर्सद हुँदैन भनेर परिवारबाट मैले सामाजिक कार्यमा छुट पाउँदै आएको छु ।
विसं २०३६ सालमा अंशबन्डा भएर छिन्नभिन्न दुई हजुरबाका तीन तीन छोराका सबै सन्तानको पहिलोपटक त्यति ठूलो संख्यामा पुख्र्यौली घरमा जमघट भएको थियो ।
सबै तयारी सकिएर ढाटाका पाहुना र घरमा आइसक्तासमेत हजुर आमाको काजकिरिया बाले किन गर्न सक्नुभएन भन्ने विषयको जानकारी थिएन । ममात्र होइन मेरो परिवारका अधिकांश सदस्यलाई विस्तृतमा जानकारी थिएन । किनभने बा पुस्ताका कोही पनि जीवित थिएनन् । बेलामा सोधिएन । अब भनिदिने कोही बाँकी छैन । बाको आग्रहका आधारमा हजुरआमाको आत्माको शान्तिका लागि यज्ञ गर्दै छौ भन्ने बुझेको थिएँ ।
न मलाई पूर्वजको इतिहास थाहा थियो न त आफ्नै बाजेका सबै सन्तान चिन्थेँ । अंशबन्डा भएर २०३६ सालमा बर्दिया झरियो । सुरुका दिनमा पढाइ र काम थालेपछि काठमाडौंको व्यस्त दैनिकीका कारण पनि फर्किएर पहाड जाने मौका मिलेको थिएन । तीन वर्षको उमेरमा तराई झरेर काठमाडौंमा पढेकाले आफ्ना पूर्वजको रीति, रिवाज, चालचलन र संस्कारसमेत म बुझ्दिनथेँ ।
विसं २०७३ कात्तिक ९ गते । बेलुका खाना खाएर पिताजीहरुले २०१९ सालमा बनाएको पुख्र्यौली घरमा बसिरहेका थियौँ । भतिज कृष्णबहादुरले (उमेरले पिता जीका समवयी) पिता पूर्खाको इतिहास र पूजा गर्नुपर्ने कारणको इतिवृत्तान्त यसरी सुनाए । उनी भन्दै थिए – ‘‘म यी कुरा बाजेहरुबाट सुनेका आधारमा भन्दैछु । अब इतिहास थाहा पाउने कोही जीवित छैनन् ।’’
‘‘तेह्राैँ शताब्दीमा सिंजाका राजा जितारी मल्ल मलय बमले सर्वज्ञधर पण्डितलाई बिर्ता दिएपछि हाम्रा पुर्खा जुम्लाबाट बसाइँ सरेर ‘नेपा’ आए । नेपामा बसोवास गरेकाले हाम्रो थर नेपाल रहन गयो । देश विदेशमा फैलिएका नेपालहरु उनै सर्वज्ञधर पण्डितका सन्तान हुन् ।’’
सन्तान बढ्दै जाँदा मेरा बूढा बाजे दामोदरका दुई छोरा (माइला लक्ष्मीप्रसाद र साइँला हरिप्रसाद) जंगल फाँडेर खेतपाती र पशुपालन गरी बस्न थाले । भलायोघारी फाडेर बसेकाले हाम्रो घर भएको ठाउँ भलायाकाटियाका नामले चिनिन्छ । मेरा बा डेढ वर्षको हुनुहुँदा भदौ महिनामा बाजे लक्ष्मीप्रसादको मृत्यु भयो । जिउँदाको जन्ती मर्दाको मलामी भन्ने हिन्दुहरुको संस्कार नै हो । मलामीमा धेरै मानिस सहभागी भए । धर्म गरे मलामी कमाइन्छ भन्ने चलन अझै छ । गाउमा चर्चा चलेछ हैन बाजेले कति धर्म गरेका रहेछन् त यति मलामी कमाए । पादुका बाजेको दाहसंस्कार भयो ।
बाजे बितेको दुई महिनामात्र भएको थियो विसं १९९० ताकाको कुरा हो । हैजाको महामारी फैलियो । मेरी हजुरआमा देवु सात, साढे दुई र साढे एक वर्ष (देवीप्रसाद, मेरा बा¬¬) का तीन बालक छोरालाई छोडेर जानु भयो ।
हैजा सर्ने डरले हजुरआमाको लास उठाउने कोही भएन । मलामी आउलान् भनेर एक दिन कुरियो । मृत्युलाई जितेर लास उठाउने हिम्मत कसको ?
केही उपाय रहेन । साना छोराहरुको सहयोगमा साइँली बजैले घर नजिकैको घर मेलोमा खाडल खनेर जसोतसो जेठानीको लास गाडिन् । नाबालक छोरा । कसैको व्रतबन्ध गरेको छैन । हजुरआमाको काजकिरिया गर्ने कोही भएन ।
त्यो महामारीमा कति मरे थाहा छैन । हिजोआजजस्तो अस्पताल, मिडिया र सडक यातायातको सुविधा थिएन । न त जन्ममृत्युको अभिलेख राख्ने निकाय नै थिए ।
टुहुरा बालक छोराहरुको पालन पोषणको जिम्मेवारी साइँली बजै पम्फा (विधुवा)ले लिइन् । छुट्टिसकेको परिवारलाई एकीकृत गरिन् । उनका जेठा छोरा पन्ध्र सोह्र वर्षका थिए भने अरु दुई बाह्र र दस वर्षका । विधुवा हजुरआमाको जिम्मामा जेठाजुका छोराहरुको जिम्मेवारी पनि थपियो । सबैको पालन पोषण पनि गरिन्, संंस्कार दिइन् रत्तिभर भेदभाव नगरेर । पछिसम्म पनि गाउ“मा चर्चा चल्थ्यो रे हैन यी बाहुन नानीहरु कुन् माइलाका कुन् कान्छाका सन्तान हुन् हँ? चिन्नै गाह्रो छ ।
त्यस घटनाले हाम्रो परिवारको एकतालाई चट्टान सरह बलियो बनाइदियो । छुट्टिएको चालीस वर्ष हुन लाग्यो तर हाम्रो परिवारको एकता गर्व गर्न लायक छ ।
म जन्मिएपछि पनि दुई बाजेका (छ ‘बा’हरु) सन्तानको ४५ सदस्यीय हाम्रो परिवार सगोलमै थियो ।
हैजाको महामारीले हाम्रा ‘बा’ हरुको सर्वस्व त गुम्यो नै त्यही पीडाले उहा“हरुलाई संघर्ष गर्न पनि सिकायो । संघर्षमात्र सिकाएन एउटा आदर्श परिवारका रुपमा स्थापित गरिदियो ।
मेहनतको परिणाम नै मान्नुपर्छ – साढे तीन दशकको अन्तरालमा ठूला बा प्रभुरामले व्यापारमा उल्लेख्य सफलता पाउनुभयो । उहा“कै कुशल नेतृत्व र व्यवस्थापनमा हाम्रो परिवारले त्यस क्षेत्रमा ख्याति कमायो । भारत बेलायतको अधीनमा भएका बखत अफिमको व्यापार निक्कै फस्टाएको थियो । ती दिन अफिमको बेचबिखन र उपभोगमा प्रतिबन्ध थिएन । दोस्रो विश्वयुद्वताका ब्रिटिस भारतमा अफिमको ठूलो माग थियो । मध्यपश्चिमका गाउँ गाउँबाट ठूलो परिमाणमा अफिम संकलन गरेर राजापुर पुर्‍याइन्थ्यो । भारतीय व्यापारीले त्यहीँबाट उठाउँथे । यो व्यवसायबाट उहाँले मनग्य आर्जन गर्नुभयो ।
पश्चिम नेपालको व्यापार केन्द्र राजापुर र दुल्लुमा कपडा, नुन तेलको व्यवसाय विस्तार गर्नुभयो । दैलेख, सुर्खेत र बर्दियामा प्रशस्त जमिन जोड्नु भयो । गाउँमा शिक्षाको ज्योति बाल्नुपर्छ भनेर कृष्णकोट स्कूल खोल्नु भयो । अहिले उच्च मावि बनेको छ । कृषि र पशुपालनको सुधारका लागि बीउ र उन्नत भैँसी भित्र्याउनु भयो ।
साढे तीन दशकको अथक परिश्रमबाट परिवारलाई आर्थिक सामाजिकरुपमा सबल बनाउने ठूला ‘बा’ प्रभुरामको पनि २०२४ सालमा प्राकृतिक प्रकोपमै परेर ज्यान गयो । प्रकृति जति बलवान त कोही रहेछन । बर्दियामा व्यवसाय र खेतीपातीको व्यवहार मिलाएर दुल्लु (दैलेख) जाने क्रममा चट्याङ परेर घर पुग्न नपाउँदै बाटोमै उहाँको प्राण गयो । पिता तुल्य दाजुको मृत्युपछि मेरा ‘बा’ हरु फेरि टुहुरा हुनुभयो । मियो भाँचिएपछि व्यापार व्यवसाय बिग्रियो । ऋण लिने पनि तिर्न आएनन् । उहाँले जोडेको जमिनसमेत लाखापाखा भयो ।
फेरी हाम्रो परिवारमा दुःखका दिन सुरु भए । ‘बा’ पुस्ताले मेरी हजुर आमाको न राम्ररी काजकिरिया गर्न पायो न त उहा“को आत्माको शान्तिका लागि यज्ञ नै । लक्ष्मी र हरिप्रसादका छ छोराका सन्तान हामी (एक दर्जन छोराले) संयुक्तरुपले हजुरआमाको शान्तिका लागि कात्तिक १०, २०७३ मा यज्ञ लगायौँ । मेरा लागि पूजा विधि र संस्कार एकदमै नौलो थियो ।
काम सकिएपछि रातिदेखि नै फर्किने तयारी गर्दै थियो । नातागोता, आफन्त र गाउँका दिदी बहिनीले हाम्रो बिदाइमा गीत गाएरै रात काटे । तिनले गाएका हरेक लयमा सन्देश थियो – ‘‘सहर पस्यौ, जन्मभूमि, संस्कार र संस्कृति नभुल्नू । सहरको रमझममा तिमी चाहे जति हराए पनि हाम्रो जस्तो निःस्वार्थ चोखो माया पाउने छैनौ ।’’
हाम्रो बिदाइमा रात काट्नेहरु सबै कुनै न कुनैरुपमा हाम्रा बाहरुबाट सहयोग पाउनेहरु नै थिए । हाम्रो पुस्ताका अधिकांश सदस्यलाई त चिन्दा पनि चिन्दैनथे ।